Soo dejisan WirelessKeyView 2.11 – Vessoft
WindowsShabakadDejinta iyo MaamulkaWirelessKeyView
Qeybta: Dejinta iyo Maamulka
Bogga rasmiga ah: WirelessKeyView
WirelessKeyView – software ah inuu ka soo kabsado ka passwords lumay ee Wi-Fi. software The helaa oo soo kabanayo furayaasha oo dhan ammaanka WAP ama WPA oo ku kaydsan yihiin in adeegga aasaasiga ah ee nidaamka qalliinka. WirelessKeyView waa awoodaa inuu ka soo kabsado lambarka sirta ah ee Wi-Fi in ay ku kaydsan yihiin in adeegyada la xiriira nidaamka qalliinka, iyada oo aan suurtagal ah inuu ka soo kabsado furayaasha badbaadiyey by software dhinac saddexaad ah. WirelessKeyView kuu ogolaanaya in aad si loo badbaadiyo liiska sirta laga helay a files dokumenti qoraal, HTML iyo XML ama nuqul fure u gaar ah si ay u sabuurad ah. Sidoo kale software ka taageertaa furitaanka ka sidayaal xog kala duwan.
Recovery oo ka mid ah sirta Wi-Fi
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shabakadda
Takhalusid ah furayaasha adapters network jir
Kaydinta ee passwords in file ama sabuurad
Soo dejisan WirelessKeyView
Faallo ku saabsan WirelessKeyView
WirelessKeyView Xirfadaha la xiriira
Software inay la shaqeeyaan dekedaha Moodeemka iyo routere. Software wuxuu taageeraa tiro badan oo lagu daydo kala duwan ee qalabka network.
cFosSpeed – softiweer si kor loogu qaado isku xirka internetka. Software-ka ayaa awood u leh inuu hagaajiyo isku xirka fiilooyinka iyo Wi-Fi, shabakadaha P2P iyo codsiyada VoIP.
Software inay la shaqeeyaan teknoolajiyada VPN ah. Software waxay leedahay qalab in la abuuro channel Windows XP sida dhibic-ka-barta ama server-ka-macaamiisha.
Qalabka IP IP-ka ee xanaaqa ayaa ah iskaanka kumbuyuutarka wejiga badan leh ee aaladaha ku xiran shabakad siisa macluumaad ku filan oo ku saabsan cinwaanka IP kasta ee la ogaado.
Software-ka lagu baari karo shabakadaha jiritaanka nuglaanta. Software-ka wuxuu taageeraa noocyada kala duwan ee baaritaanyada wuxuuna hubiyaa amniga shabakada ee cabirka ama kakanaanta kala duwan.
Magic Camera – oo ah barnaamij loogu talagalay qulqulka fiidiyowga ee saameynta muuqaalka muuqaalka kala duwan iyo miirayaasha shaandheynta. Softiweerku wuxuu la falgala inta badan adeegyada isgaarsiinta fiidiyaha.
CrystalDiskInfo – waa barnaamij lagu hubiyo heerka iyo heerka kartida wadida adag. Software wuxuu soo bandhigayaa macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan tilmaamayaasha farsamo ee kaladuwan ee diskiyada.